डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्रीको राजदूतमा मनोननयले जापानमा रहेका नेपालीहरू हर्षित « Harekpal
डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्रीको राजदूतमा मनोननयले जापानमा रहेका नेपालीहरू हर्षित
हरेकपल May 23, 2022
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्री सुनुवाइबाट अनुमोदित भएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकारले क्षेत्रीलाई कूटनीतिक कोटाबाटा सिफारिस गरेको थियो । सम्बन्धित मुलुक (जापान)बाट क्षेत्रीको अग्रिमो(स्वीकृति) प्राप्त भएपछि कानुनतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत नियुक्ति गर्नेछन् ।
परराष्ट्र सेवाका क्रममा डा. क्षेत्री जुनजुन देशमा पुगेका छन्, त्यहाँत्यहाँ उनले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिका लागि केही न केही उल्लेख्य कार्य गर्दै आएका छन् । डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्री साहित्यका क्षेत्रमा दुबसु क्षेत्रीका नामले प्रख्यात छन् । कवि, गीतकार, गजलकार, अनुसन्धाता, सम्पादक आदिको परिचय बनाएका क्षेत्रीका दर्जनौँ कृति प्रकाशित छन् । म्यान्मामा रहँदा उनले ‘म्यान्मामा नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति’ नामक अनुसन्धानात्मक कृति नै प्रकाशन गरे । म्यान्माका नेपालीले नेपाली भाषा र साहित्यको प्रचार प्रसारमा उनको नाम सम्मानपूर्वक लिने गर्दछन् । बेलायतमा रहँदा उनले त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूका कविताहरूको संकलन प्रकाशन गरे भने यसअघि जापानमा बसेका समयमा जापानमा नेपाली भाषा र साहित्य नामक अनुसन्धानमूलक कृति प्रकाशन गरे ।
जापानमा रहेकी साहित्यकार शिक्षा सत्याल भन्छिन्, ‘नेपाल–जापान लेखक संघका अध्यक्षसमेत रहेका क्षेत्री जापानको राजदूतमा अनुमोदन भएकामा जापानमा रहेका नेपालीका उत्साहको सञ्चार भएको छ । कला, साहित्य र संस्कृतिप्रति विशेष रुचि भएको व्यक्तित्व राजदूत हुनुले यहाँका नेपाली हर्षित भएका छन् ।’